Izinto zangaphandle ezingalunganga: into eziyiyo, iimpawu kunye neziphumo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 12/05/2022 12:00 | Yendalo
Ingaphandle engalunganga ibhekisela kuzo zonke iintlobo zemiphumo eyingozi kuluntu, eyenziwa yimveliso okanye imisebenzi yokusetyenziswa, engekho kwiindleko zabo. Kwimekobume, abantu kunye neentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo izinto zangaphandle ezimbi Zibaluleke kakhulu ukuba zihlalutywe.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba zeziphi izinto zangaphandle ezimbi, iimpawu zabo kunye neziphumo eziphambili zokusingqongileyo.
1 Ziziphi izinto zangaphandle ezimbi
1.1 ngaphandle okulungileyo
1.2 izinto zangaphandle ezimbi
2 Indlela yokulawula izinto zangaphandle ezingalunganga kunye nokuphucula ezintle?
3 Imizekelo yezinto zangaphandle ezimbi
Ziziphi izinto zangaphandle ezimbi
Sinokuchaza izinto zangaphandle njengezo ziphumo zesibini ezibangelwa ngumsebenzi womntu okanye inkampani engenaxanduva kuyo yonke imiphumo yentlalo okanye yokusingqongileyo yaloo msebenzi.
Ngokubanzi, kukho iindidi ezimbini zezinto zangaphandle, ezintle nezimbi, esiya kwandisa ngazo apha ngezantsi. Ukuyiqonda ngcono: Umzekelo ocacileyo wesimo esihle sangaphandle lungcoliso oluveliswa lishishini kwindawo esingqongileyo xa livelisa iimoto. Le nkampani inoxanduva lokufumana izinto, ukuguqulwa kwizithuthi kunye nokuthengisa, kodwa kunikwe izinto zangaphandle ezingalunganga zale misebenzi, kusenokwenzeka ukuba isebenzise oomatshini abangcolise kakhulu kwinkqubo yokuvelisa, kunye neziphumo ezibi kwimekobume.
Izinto zangaphandle ezintle zizo zonke iziphumo ezilungileyo zemisebenzi yamalungu oluntu, engabandakanywanga kwiindleko okanye kwiinzuzo zaloo misebenzi. Inkcazo yesimo esihle sangaphandle ayiphelelanga kulo naliphi na icandelo okanye inzululwazi, ibandakanya zonke iziphumo ezilungileyo, ezinkulu nezincinci, ezinokuthi izenzo zakhe nawuphi na umntu okanye inkampani zibe nazo kuluntu lwethu.
Sithetha ngemiphumo emihle engabandakanywa kwiindleko zemveliso okanye amaxabiso okuthenga, kodwa ezinokuthi zibe nemiphumo enenzuzo kakhulu kuluntu luphela. Utyalo-mali lwezibhedlele neelebhu zokufumana unyango lwezifo ezithile ngumzekelo woku. Ekuqaleni, umntu unokucinga ukuba oku kuzibophelela kwi I-R&D inokubiza kakhulu ukuba abaphandi abalufumani unyango ngokukhawuleza.
Inyani isixelela okwahlukileyo koko, ukuba olu hlobo lomsebenzi luyimfuneko kakhulu kwintlalontle kunye nempilo yabantu, kuba kungekudala okanye kamva iyeza liza kufunyanwa elinciphisa iziphumo zesifo esihambelanayo. Eli liyeza, eliza kuthatha ixesha lokufumana, longezwe kwi-investment enkulu yezoqoqosho, liya kuba nelizwe elihle kakhulu langaphandle kuluntu ngokugcina amawaka obomi, kodwa oku akubonakali kuphando oluye lwenziwa kwaye lujongene nexesha elide.
Ngokunjalo, mininzi eminye imisebenzi enokuvelisa izinto zangaphandle ezilungileyo kuluntu, ezithi nazo zibaluleke kakhulu ekusebenzeni kwayo ngokufanelekileyo:
Tyala ekugcinweni kwempahla yoluntu (iindlela, izakhiwo, iipaki, amabala emidlalo, izibhedlele).
imfundo (ukugcinwa kwezikolo, ootitshala abaqeqeshwe ngokufanelekileyo, ikharityhulam eyaneleyo).
UPhando lwezoNyango (izitofu zokugonya, amayeza, unyango oluqalwayo).
Ngokungafaniyo nembonakalo entle yangaphandle, imbonakalo yangaphandle engalunganga sisiphumo sokwenza nawuphi na umsebenzi obangela umonakalo eluntwini, ungachazwanga ngeendleko zawo. Nangona sijongene neengqikelelo ezivela kwicandelo lezoqoqosho, ezi ngcamango inokudluliselwa kuyo nayiphi na indawo yobomi bemihla ngemihla.
Umzekelo omhle wezinto zangaphandle ezingalunganga kukungcoliseka kwendalo, ngakumbi ishishini, ngamaqumrhu amakhulu. Yiba nomfanekiso-ngqondweni wenkampani enkulu yemigodi esebenza ngokugrumba nokusetyenzwa kwamalahle. Xa belinganisa iindleko zokwenza umsebenzi, abawuthatheli ngqalelo izinga eliphezulu longcoliseko oluya kubangela ukusingqongileyo. Oku kuthathwa njengento yangaphandle engalunganga kwaye Sisiphumo senkqubo yemveliso yenkampani. kwaye ayibonakali kwixabiso lentengiso okanye kwindleko yokuvelisa amalahle.
Ukuba siyeka kwaye sicinge, phantse zonke izenzo zinezinto zangaphandle ezimbi kuluntu. Umzekelo, ukusetyenziswa kwecuba kuneziphumo ezibi kwimpilo yomsebenzisi, kodwa kudala izinto zangaphandle ezingalunganga ezifana nokuhla kwexabiso leziseko ezingundoqo (ukuba umntu uyatshaya egumbini, iindonga zinokuguqulwa umbala kwaye zonakaliswe ngumsi), kwaye kunokuba nefuthe elibi kwimpilo yomntu (izigulana zesifuba zisezela umsi wecuba).
Indlela yokulawula izinto zangaphandle ezingalunganga kunye nokuphucula ezintle?
Urhulumente unemilinganiselo yokulawula kunye nokunciphisa ukuveliswa kwezinto zangaphandle ezimbi, ezifana:
Ukurhafisa ezona nkampani zingcolisekileyo ukukhuthaza ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyekayo kunye neenkqubo zokuvelisa ezizinzileyo.
Lawula imisebenzi ethile (umzekelo, ukutshaya, ukuhamba kwezithuthi kwizixeko ezikhulu).
Iinkqubo zemfundo kunye nokwazisa uluntu.
Kwelinye icala, kukwakho iindlela eziphucula kwaye zonyuse izinto zangaphandle ezilungileyo ezenziwe ziinkampani kunye nabantu:
Izibonelelo kumaziko emfundo (ii-nursery, izikolo, njl.).
Ukubonelela ngenkxaso-mali yophando kunye nophuhliso, ngakumbi kwiinkalo zenzululwazi kunye nezonyango.
Izinto zangaphandle, nokuba zilungile okanye zingalunganga, azikho kuphela kwinqanaba lezoqoqosho loluntu. Naluphi na uhlobo lokuziphatha, njengokutshaya okanye ukuphosa iplastiki ecaleni kwendlela, ingaba nemiphumo emfutshane / yexesha elide kuluntu, olunokuthi lube lubi okanye lube luhle, kuxhomekeke kwindlela yokuziphatha.
Imizekelo yezinto zangaphandle ezimbi
Makhe sicinge ngayo, zonke izenzo zethu, nokuba zingabalulekanga kangakanani na kuthi, zinempembelelo kwabanye abantu ababumba uluntu lwethu.
Izinto zangaphandle ezimbi zivela xa izenzo ezo sithatha njengeenkampani, abantu okanye amakhaya kumsebenzi aneziphumo eziyingozi zesibini kumaqela esithathu. Ezi ziphumo azifakwanga kwindleko iyonke. Iziphumo ezibi ngenxa yogxininiso azikho kwimveliso okanye kumaxabiso eenkonzo zoluntu ngexesha lokusetyenziswa.
Izinto zangaphandle ezingalunganga, njengezinto zangaphandle ezilungileyo, Ziyingcamango yezoqoqosho. Kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba ezi zinokusetyenziswa ngokulinganayo ngaphandle kwelizwe lezoqoqosho. Ngaloo ndlela, kungekuphela nje imisebenzi yezoqoqosho evelisa izinto zangaphandle, kodwa kunye naloo misebenzi echongiweyo njengengekho yezoqoqosho.
Izinto zangaphandle zibonwa kunye neziphumo ezithe ngqo ezingekhoyo kwixabiso elihlawulwe kwimveliso, ukusetyenziswa okanye ukusetyenziswa.
Imizekelo yezinto zangaphandle ezingalunganga ezinikwe ngezantsi ingasinceda ukwenza nzulu ukuqonda kwethu izinto zangaphandle ezinjalo. Siyazi ukuba imithombo yezinto zangaphandle ezimbi zinokungenasiphelo. Noko ke, ngokomzekelo, sinokusalatha koku kulandelayo.
ukusetyenziswa gwenxa kotywala
inkunkuma ene-radioactive njl
ingxolo ye-injini iphezulu kakhulu
Kunokuthatyathelwa ukuba umphandle ongalunganga luchungechunge olukhulu lwezenzo kunye neempembelelo kunye neendleko.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nezinto zangaphandle ezimbi kunye neempawu zabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » izinto zangaphandle ezimbi